Kusoo dhawow Baishiqing
Fujian Jinjiang baishiqing dharka Weaving Co., Ltd.waxay ku taal xeebta koonfur-bari ee Shiinaha, oo ku dhow Gobolka Zhejiang ee waqooyi-bari, Gobolka Jiangxi ee waqooyi-galbeed, Gobolka Guangdong ee koonfur-galbeed, waxayna ku wajahan tahay Gobolka Taiwan oo ka sii gudbaya marinka Taiwan ee koonfur-bari. Shirkadda waxaa la aasaasay 1990-meeyadii, waxay leedahay in ka badan 30 sano oo waayo-aragnimo soo saarista dharka hodanka ah, waxaan nahay wax soo saar xirfadeed oo noocyo kala duwan oo nigis ah iyo nigisyo ganacsiyo waaweyn. Aagga dhismaha waa 15000 mitir murabac.
Waxaan leenahay saddex nooc oo waaweyn
dharka hoose, dharka yoga iyo dharka dabbaasha
Naqshadaynta dharka hoosta ah waxaan u hoggaansamaynaa:raac qaabka jidhka, quruxda wadnaha; isticmaalka dharka aan u hoggaansameyno: raaxo leh oo qumman, caafimaad marka hore. Dhanka tikniyoolajiyaddawaxaan u hoggaansameynaa:dulmar jirka oo dhan, kalsooni leh oo had iyo jeer la socda. Waxaan doorannaa dhar tayo sare leh si aan u sameysano suugaanta yoga, taas oo qallajin karta oo si dhaqso leh u neefsan karta. Ku habboon orodka, yoga, boodka, qalabka isboortiga iyo jimicsiyo kale oo isboorti.
Wiilal iyo gabdhoba way xiran karaan dharka dabbaasha. Astaamaha dharka: jilicsan, raaxo leh, qalayl deg deg ah, aan sun ahayn. Qaabka naqshadeynta ayaa ugu caansan maanta.
Waxyaabaha kor ku xusan waa badeecadeenna, xagga warshadaha iyo iibsadayaashu waxay ka yimaadeen iibsadayaal kala duwan oo ammaan iyo ammaan badan leh.
Ku soo dhawow Su'aalaha
Howlgalka: Ku soo ururi kuwa caqiidada wadaaga, kuna dadaal aragti guud; Samee nidaam silsilad sahay ah si aad u bixiso dhar iyo adeeg tayo sare leh; Abuur nolol ka wanaagsan dadaalkeena!
Falsafada Horumarinta: Horay u sii wad dhinacyada kala duwan ee tartanka, ku dheji horumarka degdegga ah.
Qiimaha: Daacadnimo iyo cadaalad Macaamiil marka hore Dadka u janjeedha Shaqada adag
Ruux Ganacsi: Waan sameynaa! Waan awoodnaa!
Mashiinka Goobaha Weyn